Dhisidda Bulshada Waddanka River, 13,000 Strong and Counting
Isgaarsiinta 'Bluestem Communications' waxay ka shaqeysaa gobollada dalka oo dhan iyadoo la dhisayo ololeyaal isgaarsiineed hal abuur leh oo ujeeddadeedu tahay inay ilaaliso dhulka ugu qaalisan iyo ilaha biyaha ee Waqooyiga Ameerika. Waxay horumariyaan wacyiga dadweynaha iyo isfahamka ku saabsan doorashada arrimaha deegaanka waxayna dhisaan ballanqaad ballaaran oo wax looga qabanayo arrimahaas iyada oo loo marayo ficillo iyo siyaasado shaqsiyadeed. Hawsha ugu weyn ee ururku waa in si macno leh loogu hawl galo dadka laguna xoojiyo awood ay wax ku qabtaan iyaga oo samaynaya xidhiidhka ka dhexeeya deegaanka, nolol maalmeedkooda, iyo qiimahooda aasaasiga ah.
Shabakadda Wabiga Mississippi River (MRN) waxay u heellan tahay ilaalinta dhulka, biyaha iyo dadka ku nool Wabiga Weyn ee ugu weyn. Shabakaddu waxay horumarineysaa himilooyinka ay u samayso Wabiga iyada oo la dhiso deegaan qaran oo ka mid ah Waddamada Wabiga - dadka u heellan inay ilaaliyaan Wabiga iyaga oo qaadaya tallaabooyin fudud 1 Mississippi olole. Bluestem waxay heshay miisaaniyad McKnight si ay u koraan Waddanka River Citizen iyada oo loo marayo qorista, waxbarashada, ka qaybqaadashada iyo u doodista.
Laga soo bilaabo nadiifinta webiyada iyo safarka kayim si loo isticmaalo dhirta cawska ah iyo ka qayb qaadashada arimaha bulshada, kooxdan sii kordhaysa ee dadku waxay noqotey xoog xoog ah muwaadiniinta hubaysan oo leh aqoon iyo dadaal si ay u caawiyaan ilaalinta Wabiga Mississippi.
Mid ka mid ah istaraatiijiyooyinka ololaha ayaa ahaa inay shaqaalaysiiyaan oo ay ka qaybgalaan "Citizens River" oo ku kala bar qeybta waqooyiga wabiga, oo si gaar ah ugu hawlgalaan arrimaha nafaqada nafaqada ee ka sii daraya gobollada beeraha sida Iowa, Minnesota iyo Illinois. Ololaha ayaa ku guuleystay guushii ay dad ku qori jirtay si ay u noqdaan Citizens River iyada oo iyaga ku xiraya wabiga iyo bixinta tallaabooyin ay qaadi karaan si ay u caawiyaan ilaalinta. Ololaha ayaa qoraya Citizens River River dhacdooyinka wabiga oo dhan sanadka oo dhan.
Sanadka 2014, 1 Mississippi ayaa ka soo qayb galay Fair State Fair, markii ugu horeysay ee ololaha ka qaybqaato dhacdo weyn oo weyn. Ololaha ayaa iskaashi la galay miiska Common, koox ka shaqaynaysay baro booqdayaasha Fair Fair State ee ku saabsan sameynta doorashooyin cunto ah oo macquul ah. Dhacdadan 10-ka maalmood ah, siddeed ruux oo reer woqooyi ah ayaa si mutadawacnimo ah ugu shaqeynaya bandhig faneed iyada oo beeraley maxaliga ahi ay ku hawlan yihiin dadweynaha, la wadaagaan waayo-aragnimadiisii wanaagsanaa iyadoo la adeegsanayo dalagyada dabiiciga ah sida istaraatijiyad lagu yareeyo wasakheynta nafaqada ee webiga.
Tan iyo markii ololaha laga bilaabo 2009kii, in ka badan 13,100 River Citizens ayaa la qorey oo ku xirnaa webiga iyada oo loo marayo waddooyin kala duwan. Laga soo bilaabo nadiifinta webiyada iyo safarka kayim si loo isticmaalo dhirta cawska ah iyo ka qayb qaadashada arimaha bulshada, kooxdan sii kordhaysa ee dadku waxay noqotey xoog xoog ah muwaadiniinta hubaysan oo leh aqoon iyo dadaal si ay u caawiyaan ilaalinta Wabiga Mississippi.
Si toos ah ugala hadla beeralayda, Helitaanka Walaac Wadaag ah ee Biyaha Nadiifta ah